Zviwanikwa zvekutsvaga uye Pitch Vatauri uye Vanyori venhau
Agility PR Mhinduro - Iyo suite yezvigadzirwa uye masevhisi anovimbwa nePR masangano nemasangano pasirese.
Kuruma PR - Isu tinoita kuti zvive nyore kumabhizinesi madiki kuwana uye kupindura kune makuru ma media mikana.
Gorkana - yakanyanya nzwisisika uye yakajeka midhiya njere muUK.
Batsira Mutori wenhau Kunze - Kubva kuThe New York Times, kuenda kuABC News, kuenda kuHuffingtonPost.com uye nemunhu wese ari pakati, vangangoita 30,000 vezvenhau vakataura. HARO masosi mune yavo nyaya. Wese munhu nyanzvi pane chimwe chinhu. Kugovera hunyanzvi hwako kunogona kukuwanisa iwe iro hombe mukana wenhau wawanga uchitsvaga.
Mutori wenhau - Tsvaga vatori venhau uye ona zvavari kunyora nezvazvo.
Media Kitty inobhadharwa sevhisi ($ 89.95 pamwedzi) yevashandi vebhizinesi kuti vataure uye vagare vakabatana nevatori venhau kuburikidza nekukurumidza uye nyore kutumira. 9,704 2001 vatori venhau uye PR pros inoshanda kubvira XNUMX.
MediaOnTwitter - Gadzira kushamwaridzana nevatori venhau, vanyori pamwe nevamwe vezvenhau vanhu kuburikidza neTwitter. Vatevere ivo uye ivo kumusoro-ku-dheti maererano neyakagadziriswa mukupedzisa kwekambani. Zvinhu zviviri zvine mushumo wakanaka pane vezvenhau vanhu pa Twitter Media pa Twitter.
The Dzvanya Meltwater media hukama software-se-se-sevhisi inobatsira iwe kuvaka zvimwe zvakanangwa midhiya zvinyorwa, uchishandisa iyo yega chinyorwa-chakavakirwa mutapi venhau kutsvaga muindasitiri. Tsvaga vatori venhau vanokodzera nyaya yako zvichibva pane zvavakanyora munguva yakapfuura, wobva wagovera meseji yako neemail kana pamusoro petambo kubva papuratifomu imwe chete. Kuzivisa: Meltwater mubatsiri we Martech Zone
Muck Rack (sevhisi yakabhadharwa inotangira pamadhora makumi maviri nemana pamwedzi) iri kutungamira kufamba kupedza PR spam nekuisa vatapi venhau mukutonga kwavo inbox. PaMuck Rack zviri nyore kuwana mutori wenhau akakodzera, ona zvavanoita uye zvausingavhare, uye uvatumire mapaki avanoda kuwona.
NewsCertified inopa vezvenhau venhau vepasirese dhatabhesi inotsvaga yezvakavimbika, nyanzvi dzekubvunzurudza uye nyaya dzenyaya dzinowanikwa 24/7.
Pitching Notes yakasikwa kuti ipe PR zvayakanakira mukana wekudzokorora uye kutaura pamusoro pezvavanosangana nazvo nevamwe vatapi venhau.
ProfNet - Kutsvaga yakagadziriswa midhiya? Vatori venhau uye mabloggi vanotumira zviuru zve nyaya zvinotungamira mwedzi wega wega kune vashandisi veProfNet. Ita kuti vezvenhau vauye kwauri naProfNet.
Mutori wenhau Kubatanidza ndiyo imwe yandakangobatana, asi ini ndinoda mafomati emaemail avo uye yavo system yekupindura - yakanyanya kumberi kupfuura HARO.
ResponseSource - UK Media Contacts Dhatabhesi - Tsvaga uye uone akakodzera ekugadzirisa mafoni uye mikana yePR.
KunobvaBottle - Isu tinobatsira vatapi venhau & mabloggi kuwana masosi. Isu tinobatsira mabhizimusi & PR pros kuwana pachena kushambadza.
Tags: agile pragileprkuruma prmutori wenhautsvaga vatori venhautsvaga vatori venhaugorkanaharobatsira mutori wenhau kubudajounralistedmutori wenhauvatapi venhaumidhiya pa twittermidhiya promediakittymeltwater muchinamuckracknhau dzakasimbiswapitchkukanda manotsiPR Newswireprofnetmutori wenhau kubatanamutori wenhauVatori venhautsvaga ma bloggertsvaga vatori venhautsvaga vatori venhautsanangurotsime
Lusso Kutanga: Gadzira Imotokari Yekunze Kumhanya iyo Las Vegas Strip
Ndeapi epamusoro SEO Chinzvimbo Chezvinhu mu2017?
Maita basa nerondedzero yezvivakwa, Karr! Iwe unoziva chero masevhisi mune dzimwe nyika? Semuenzaniso, muRussia inonyanya kufarirwa pressfeed.ru. Chii chinonyanya kufarirwa muUK?